Rita, Writing for My Sake!: အိုင်စီ / သံမဏိကြက်ခြေ
Posted by Rita at 12/20/2010 11:21:00 AM
လင်းလင်း သိပ်မသိဘူး။ rap ဆိုတဲ့ လင်းလင်းလား မော်ဒယ်လင်းလင်းလား rocker လင်းလင်းလား။
တစ်ယောက်မှတော့ မျက်နှာကို မမြင်မိဖူးဘူး။
ကျန်လူတွေတော့ နည်းနည်းစီ နားထောင်ဖူးတယ်။
IC show ကို ၂ ခွေတွဲကြီးထုတ်တဲ့အချိန်ကမှ စကြည့်ဖူးတာ မြန်မာဆိုကျော်တွေနဲ့ ဝေးချက်ကတော့။
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ကျလာမယ့် တေလာဆွစ်လေးတော့ ကြည့်ချင်မိသားသားသားသား....
bass guitar မပါဘူးလို့ fb မှာ တယောက်တင်ထားတယ်။ ပွဲမှာတုန်းကတော့ ကြိုး လုစ် ဖြစ်နေလို့ ချောင်ထဲဝင်တီးနေတယ်။ ခဏစောင့်ပါဦးဆို... အဲဒီနောက်ပိုင်း လေဒီ ကို ရောက်နေတာနဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်တယ်မသိတော့ဘူး။ ပြန်ရောက်တော့ လင်းလင်း စနေပြီ။ ကိုယ်ခံစားလို့ မရတာတော့ bass ကြောင့်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ မပြောရင် သိမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ မသိတဲ့လူ မသိတာထက် သိတဲ့လူတွေ သိတော့ ရုပ်ပျက်တယ်။ အဲလောက်တောင် ဖြစ်ရလား။
ပထမပိုင်း တဝက်လောက်မှာ ခင်မောင်သန်းထွက်လာပါတယ် (ဘေ့စ်ဂစ်တာတီးသူ)..
ဒုတိယပိုင်းက သိပ်သတိမထားမိဘူး.. သူတို့တွေကလည်း လောနေတယ် ဒုတိယပိုင်းမှာ သီချင်းသိပ်မဆိုကြတော့ဘူး တီးပဲ တီးပြနေကြတာ.. ချစ်စမ်းမောင်တီးလိုက် ခရမ်းတီးလိုက် ဗညားတီးလိုက်နဲ့
ဝိုင်ဝိုင်း ပထမပိုင်း တတိယမြောက် အပုဒ်မှာထင်ပါရဲ့ ကိုခင်မောင်သန့် ရှေ့ထွက်တီးတယ်လေ ညီမ၊ ဘေစ့် ပါတာနဲ့ မပါတာ အတော် သိသာတယ်။ အနောက်ကနေ စမ်းတီးကြည့်နေကတည်းက ဘေစ့်သံ တချက်တချက် ထွက်လာတာ သတိထားမိတယ်။ မျိုးကြီး နဲ့ အငဲရဲ့ သီချင်း အသစ် ၂ခွေ နဲ့ သိတ်မရင်းနှီးတော့ ပွဲစဉ် အပြည့် လမိုင်းမကပ်ဘူး...ဟဟဟ။ ကိုလေးဖြူရဲ့ အဟောင်းတွေတော့ သဘောကျမိတယ်....
Lay Phyu, 87 of Shwe Pyi Aye hall in MU, warden always watched for crowds near his room.
At MU night scenes of Thitsar and Shwe Man hall, all players left their guitars, gathered and listened to his performance when his group began music.
E major student, Long hair, short longyi and sleeveless vest were his own style.
No one thought he would becomeastar judged by his appearance.
IC do as unique professional team in Myanmar.
အင်းးးးးးကျွန်တော်လည်း သိဘူးဗျ....လင်းလင်း ကို....။
မျိုးကြီးက မိုး သီချင်းဆိုမသွားဘူးလား...။
ခါတိုင်း အိုင်စီက ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ ကိုယ် လာသလားလို့..။
အိုင်စီကတော့ နိုင်ငံခြားပွဲတွေမှာ အဲလို အစီအစဉ်တစ်ကျ မဖြစ်တာ သုံးလေးခေါက်လောက် ရှိနေပြီ။
အခုလဲ ရဲရင့် စီစဉ်တာပဲလား...။
Lay Phyu, E major student in 87 of MU with long hair, short longyi, sleevelss vest who dwelled in Shwe Pyi Aye hall. I dare say no one thought he would do remarkable job in future as judged by outer appearance.
But, when his group began to raise guitars at Shweman and Thitsar hall at night scenes, the rest players left their guitars, gathered and listened with envy-eyes on his performance.
I got smiles and remember old chaotic style when I see his stylish suits in poster.
သွားနိုင်သူတွေ သွားကြပါ သွားကြပါ... သွားပိုင်ခွင့် မရှိလို့ ငေးရတယ်... ဆွေးရတယ်အေ
လေးဖြူနာမည်ကြီးကာစမှာ သင့်ဘဝက သူ့အကြောင်း cover story တင်တာ ဖတ်ဖူးတယ်။ Bro ပြောတဲ့ အကြောင်းတွေပါတာ ခု ပြန်မှတ်မိလာတယ်။
သူ ပထမခွေထုတ်တော့ မူပိုင် ကိုမင်းက မိုးကုတ်က သူတို့ သူငယ်ချင်းကျောင်းနေဘက်ဆိုတယ်။ အခွေမပြီးခင်မှာပဲ အခွေကို အပြတ်ဝယ်မယ့်သူ ပေါ်လာတော့ လေးဖြူနဲ့ ကျန်သူငယ်ချင်းတွေက ငွေထုတ်တဲ့ ကိုမင်းကို လှမ်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ ကိုမင်း စဉ်းစားပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ခုထိ မှတ်မိနေတုန်းပဲ။
"မရောင်းဘူးကွာ၊ ရောင်းလိုက်ရင် ငါတို့ အိပ်မက်တွေ ပြီးသွားမှာပေါ့" တဲ့။
အဲဒီတုန်းက စီးရီးစ်တခွေစာ ကုန်ကျစရိတ် ငွေ ၂ သိန်း။
ပြန်သတိရတုန်းလေး ချရေးပြီး မှတ်ထားလိုက်မှ။
fb မှာ အဲ့တိုင်းပဲ ပြောနေကြတယ်။ နိုင်ငံခြားပွဲတွေမှာ ဒီလိုဖြစ်တာ ခဏခဏရှိပြီဆိုတာ... ဂီတပိုင်းတော့ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘူး။ ဒါမျိုးဖြစ်တာ ပုံစံမကျတာလည်း အမှန်ပဲ။
တခုပဲ။ သူတို့အဖွဲ့က သူများနဲ့မတူဘူး။ မြင်လိုက်ရရင် ကိုယ့်အမျိုးတွေနဲ့ ဆုံလိုက်ရသလိုပဲ။ (ဒါတောင် ဒီအရွယ်မှာ ဘာမှ ခရေဇီမဖြစ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး။) အဲဒါကတော့ ဘယ်အဖွဲ့၊ ဘယ်အဆိုတော်နဲ့မှမတူတဲ့ အားသာချက်လို့ထင်တယ်။ ဆိုတော့ ပုံစံမကျတာမျိုး ဖြစ်သွားလည်း ခွင့်လွှတ်မိနေတယ်။
အိမ်က ညီမ၂ယောက်လည်း သွားကြည့်ကြတယ်။ စာမျက်နှာ ၁၅ မဆိုသွားဘူးဆိုတာ ပြောသံကြားတယ်။ ဒီလောက်လူကြိုက်များတဲ့ သီချင်းကို ဘာလို့ထည့်မဆိုသွားတာနော်... ကတောက်!(ဆိုစေချင်ကြသူ ပရိသတ်ကိုယ်စား ပြောပေးတာ :D) အမှန်တော့ ကိုယ်လည်း အဲဒီ့သီချင်းတော်တော် ကြိုက်တယ်။
ဇွန်က ရီတာ့ထက် ပိုဆိုးတယ်။ လင်းလင်းဆိုတာတောင် ခုမှကြားဖူးတာ။ :D
သီချင်းဟောင်းတွေဆိုရင်တော့ လိုက်ဆိုနိုင်ဦးမယ်။ နောက်ထွက်တဲ့အသစ်တွေ နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ နာမည်ကြီး တစ်ပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စလောက်ပဲ သူများပို့ပေးရင် နားထောင်ဖြစ်တယ်။
မအားလို့ ခုမှလာရေးရတယ်၊ မအားတာကတော့ ရီတာအသိဆုံး
လင်းလင်း - ယောက်ကျားလား မိန်းမလား?
အာဇာနည် - ပနဆိုးလားမာရော လေဆိပ်မာပါ မမြင်ချင့်အဆုံး ပထမဆုံးတွေ့တုန်းကတော့ ဒီဒဘလူပီက ဆေးမင်တွေထိုးထားတယ်လို့ တွေးနေတာ (သူသိရင် အတော်ရင်နာမယ်)
ဝိုင်ဝိုင်း - မဆိုးပါဘူး ကြားဖူးတယ် ပင်လယ်ဟာကိုယ်ပါ စိုတဲ့သီချင်းကြိုက်တယ်
မျိုးကြီး - မိန်းမကိုရိုက်တယ် ကြားထဲက သူ့သီချင်းတွေ မကြိုက်တော့ဘူး (ဟင် တမျိုးကြီးပဲ)
အငဲ၊ လေးဖြူ - ဆူညံသံတွေကို ကိုယ့်နားက လက်မခံနိုင်ဘူး
ပဲပြားအဆာသွပ် အိမ်အထိယူမလာလို့ ရီတာကိုစိတ်ဆိုးတယ်။
အိမ်ရှင်ရိုက်တာတော့ ခံရတော့မှာပဲ - အိမ်ရှင်ကလဲ သန်းခေါင်မှ အမြဲပြန်လာတာ (တူတူပဲ အပူနဲ့)
မမချစ်ကြည်နဲ့ တွေ့တယ်။ မြိုးနဲ့ တွေ့တယ်။ - နာ့ကျမခေါ်ကြဘူး မခေါ်တာပဲကောင်းပါတယ်၊ နာကလဲ အိုင်စီရှိုးသွါးတယ်ဆို ဇော်ဝင်းထုဋ်တို့လားတဲ့ မေးလိုက်တာ ဒီလိုတော်တာ
IC ကို ဇော်ဝင်းထွဋ်တို့လား မေးတဲ့လူတော့ IC အစား စိတ်နာလို့မဆုံးဘူး။ Emperor ကို လေးဖြူတို့လား မေးလည်း စိတ်နာမှာပဲ။
ဒီဇင်ဘာည က လင်းလင်းလား
သူက အခု အိုင်စီ နဲ့ ဆိုနေတာလား
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ဆိုတော့
ဒေါ်ရီတာ က အခု ၄၀ ထဲဝင်နေပြီပဲ
အာဇာနည်နဲ့ ဝိုင်းဝိုင်း က တရုတ်ကော်ပီတွေချည်းပဲ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေ ကို စလုံးမှာ ဆိုတယ်
မြန်မာတွေချည်းပဲ ကြည့်ရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး
အဲ့ဒီ အာဇာနည် ရဲ့ ကိုယ့်အနားရှိစေချင်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် က မလေးတရုတ်လေ စလုံးက သိကြမှာ
ဝိုင်းဝိုင်းသီချင်းတွေကတော့ လွန်ခဲ့သော် လွန်ခဲ့သော် တွေဆိုတော့
ဒေါ်ရီတာ တို့ ငယ်ငယ်တုံးကပေါ့
အံမလေး ခုလိုရေးတာတွေကို ဘာတွေ ပြန်ပြောမလဲလို့ ကျမ ရင်တွေခုန်လိုက်တာနော် .......
ပွဲလမ်းသဘင်နဲ့ ခပ်ခွါခွါနေတဲ့ အကျင့်ကြောင့် သူများတကာတွေ ရေးမှ ပြောမှ သိခွင့်ရတာ။ မဟုတ်ရင် ဘာမှကို မသိဖြစ်ဘူး။ အဆိုတော် လင်းလင်း ဆိုတာ အခုမှ ကြားဖူးတာ။ အဲဒီလောက်ကို သီချင်းတွေနဲ့ အနေနီးတာ။ အခုချိန်ထိ ထူးအိမ်သင်၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ခင်မောင်တိုး၊ ခိုင်ထူး၊ ချစ်ကောင်းတို့ပဲ နားထောင်ဖြစ်တယ်။ အိုင်စီ အဖွဲ့သားတွေရဲ့ သီချင်းအဟောင်းတွေလည်း နားထောင်ဖြစ်ပေမယ့် ခဏခဏ မဖွင့်ဖြစ်ဘူး။
"လမ်းပြပါဦး" ဆိုသံ ကြားရတော့ ၁၅ နှစ်လောက် ပြန်ငယ်သွားသလိုပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်က သီချင်းကိုး...
...( အသက်တွေသာ ကြီးသွားပေမယ့်... သီချင်းတွေ က နုပျို နေ ဆဲပဲ နော်..။ အဲ့ဒီသီချင်း အရမ်းကြိုက်ခဲ့ ဖူးတယ်..အရူးအမူးပဲ)
စာမျက်နှာ ၁၅ ကို လည်း နောင်တချိန် မှာ.. အခုလို စာသားလေး တွေနဲ့ သတိရကြဦးမလားပဲ.. ?